PressReader - Ilanga: 2018-10-25 - Izisebenzi zifuna kuxoshwe izikhulu
Izisebenzi zifuna kuxoshwe izikhulu
Bathi kaziwazi umsebenzi
Ilanga - 2018-10-25 - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU skhom@ilanganews.co.za
ZITHWALE kanzima iziguli esibhedlela oSindisweni, ngaseVerulam, ngesikhathi izisebenzi zibhikisha izolo ngoLwesithathu zasonga ngokuthi ngeke zibuyele emsebenzini uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal ungakazixoshi izikhulu ezizisola ngokwehlulwa wumsebenzi.
Iningi leziguli kuze kwaphoqeleka ukuba lilinde isikhathi esingamahora amabili ngaphambi kokuba zikwazi ukungena ngaphakathi esibhedlela.
Noma sezingaphakathi, bekuba yinkinga ukuthola usizo njengoba iningi labahlengikazi abangamalungu eNehawu, belibhikisha ngaphandle lifuna umnyango uphendule izikhalo zawo ngokuxoshwa kwezikhulu zakulesi sibhedlela.
Iziguli ezikhulume neLANGA, zibike ukuthi ngokujwayelekile uma zifika esibhedla, kuyaye kuqale ngo-07h30 ukusebenza, kodwa izolo zize zangena ngaphakathi kuyoshaya u-10h00.
UNkz Zodwa Msane waseNdwedwe, uthi kumthathe isikhathi ukungena esibhedlela njengoba bekubhikishwa.
“Kasazi ukuthi kwenzekeni, sifike sama ngaphandle ngoba sibona abahlengikazi bebhikisha kanti ngaphakathi bekuthulekile kungekho osisizayo. Size sakwazi ukungena sekudlule cishe amahora amabili,” kusho yena.
Kuzokhumbuleka ukuthi ILANGA libike kabanzi ngezinkinga zalesi sibhedlela ngoNhlaba (May) lapho kuvele ukuthi ukushoda kwamaphilisi kuholele ekubeni iziguli zijikiswe zitshelwe ukuba ziyowathenga ekhemisi.
Kulolu daba izisebenzi bezikhala nangokushoda kwabahlengikazi nemishini yokuwasha, okuthiwa sekunesikhathi ifile ingalungiswa. Bekukhalwa nangokungabikhona kwe- medical manager, ama- medical officer, yisystems manager, yi- operational manager ne-waste management officer ukukha nje phezulu.
Kuzona zonke lezi zikhalo, izisebenzi zithi uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal kawukaze uphendule.
Zisole nomphathi wesibhedlela ngobudedengu njengoba zithi kaziphindeli emsebenzini umnyango ungamsusile yena nozakwabo okungumphathi wakwa- human resource ne- finance manager.
UMnu Ayanda Zulu, onguNobhala wesiFunda weNehawu, uthe umnyango ukhombise indelelo kubona njengoba ungakaziphenduli izikhalo abaziyise kuwona ngoNhlaba.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkz Ncumisa Mafunda, uthe: “Iyamangalisa futhi iyakhathaza nokho imibiko ngesiteleka esingekho emthethweni, ikakhulukazi ngoba umnyango unobudlelwano obuvulelekile futhi usebenza ngokubambisana nenyunyana emele izisebenzi.
"Kusukela ngoNhlaba umnyango ubuxoxa nenyunyana ngemizamo yokuxazulula izikhalo zezisebenzi, futhi uzoqhubeka nalokho. Isimo sesibuyele kwesejwayelekile esibhedlela. Umnyango ufisa ukuxolisa kunoma ngubani ophazamisekile ngokwenzekile.”
BEZIYIGXOBA izisebenzi esibhedlela oSindisweni zikhala ngokunganakwa wumnyango wezempilo.